UserVoice: Fanehoan-kevitra, fangatahana endri-javatra ary fanaraha-maso ny bibikely natao tsotra! | Martech Zone
Alarobia, Septambra 18, 2013 Alarobia, Septambra 18, 2013 Douglas Karr
Ireo olona ao amin'ny UserVoice sahirana amin'ny fananganana sy ny fanandramana fitaovana vaovao hanampy anao hampiasanao ny mpampiasa anao, hahazoanao valiny tsara kokoa, atosiky ny angona, ary hanome fanohanana tsara kokoa noho ny hatramin'izay. Nandritra ny roa volana farany dia nanandrana ny sasany tamin'ireo fitaovana ireo izy ireo tao amin'ny console admin an'ny UserVoice an'ny mpanjifany, ao anatin'izany ireo widgets Fahafaham-po sy SmartVote vaovao, ary koa endrika fifandraisana vaovao sy tsotra kokoa. Androany, ataon'izy ireo ho an'ny rehetra ireo fitaovana vaovao ireo!
Hihaona amin'ilay widget vaovao sy maoderina
Ny Widget reimagined tanteraka dia manome traikefa amin'ny fampiharana feno ho an'ny mpanjifanao mba hahazo ny fanampiana ilainy ary ho anao (mavitrika) hangataka ny valiny ilainao. Izy io dia manasongadina SmartVote ™, Fanamarihana ny fahafaham-po, ary fivoahana valinteny Instant nohatsaraina ho an'ny endrika fifandraisana.
Ny User Insights dia ahafahanao mahazo fomba fijery misimisy kokoa momba ny mpampiasa anao rehetra - tsy ireo manome anao valiny manokana na mandefa tapakila ihany. Ampizaro ary atsofohy ireo toetran'ny mpampiasa manokana, ao anatin'izany ny karazana mpampiasa, drafitra, haavon'ny asa, haavon'ny fahafaham-po, fidiram-bola miverimberina isam-bolana, sanda mandritra ny androm-piainana, sy maro hafa.
Fahafaham-po amin'ny mpampiasa
Ny fanamarihana fahafaham-po dia ahafahanao manaraka fironana mora foana ary mampifandray ireo valiny tsara na ratsy amin'ny faritra manokana amin'ny fanatsarana ny vokatra. Ny bitsika ao amin'ny app dia manome taha ambony kokoa noho ny fanadihadiana mailaka nentim-paharazana ary ahafahanao manisa ny ROI fanampiana lehibe.
Atsofohy ao amin'ny sehatra mpampiasa manokana hahitana ny fiovan'ny fahafaham-po amin'ny demografika. Fantaro ireo mpanentana anao ary sorohy ny fikororohana alohan'ny hitrangan'izany. Amporisiho ny mpanentana hampiely ny teny amin'ny sioka.
Hevitra avy amin'ny mpampiasa w / SmartVote ™
Ny tatitry ny User Feedback beta dia fomba vaovao natosiky ny angon-drakitra handaminana, hanivana ary hikajiana ny statistika amin'ny tamberina napetraka tao amin'ny kaontinao. Izy io dia manambatra angona avy amin'ny Widget SmartVote ™ vaovao miaraka amin'ny angon-drakitra User Insights mba hanampiana anao hahalala izay hevitra manan-danja indrindra amin'ny andiana mpampiasa samihafa.
Izany dia mandeha lavitra mihoatra ny rafitry ny vatam-pifidianan-dry zareo mba hanomezana anao ny angon-drakitra ilainao handraisana fanapahan-kevitra hendry izay hitondra ny vokatrao (sy ny isa mitazona) ho any amin'ny ambaratonga manaraka.
Ny Widget SmartVote vaovao dia mamela ny mpampiasa hanao laharam-pahamehana izay hevitra mafana sy izay hevitra tsy ary mamela anao hahazo valiny manan-danja amin'ny statistika. Sivano ary zahao ireo hevitra ao amin'ny kaontinao iray manontolo - tsy ao anaty forum manokana fotsiny. Ataovy mialoha ny laharam-pahamehana amin'ny toetran'ny mpampiasa sy ny kaonty.
Fandraisana fifandraisana vaovao ho an'ny vavahadin-tranonkalanao
Raha ny fametrahana ny widget vaovao amin'ny tranokalanao manokana dia tsy voatery, amin'ny herinandro ambony UserVoice dia hisolo ny takelaka mahazatra "Support support" ao amin'ny vavahady tranokala UserVoice (subdomain.uservoice.com) miaraka amin'ny Widget Mifandraisa vaovao:
Ireo endri-javatra vaovao ireo dia misy ho an'ny rehetra izao UserVoice kaonty. Raha manana drafitra tokana misy valiny fotsiny ianao na helpdesk fotsiny, UserVoice dia afaka manampy anao hamindra ny kaontinao amin'ny iray amin'ireo drafitra vaovao vao manomboka mankafy ny UserVoice rehetra. Raha hametraka ny widget vaovao dia tsidiho ny fikirakirana kaontinao na vakio bebe kokoa momba ny fametrahana ny widget vaovao.
Tags: fanehoan-kevitry ny mpanjifampanjifa fanohananahevitry ny mpampiasahevitry ny mpampiasaUserVoice
17 Jul 2009 amin'ny 1:51 PM
Tiako ny hevitrao amin'ny fampiasana rafitra fanarahan-maso bibikely mba hifandraisanao amin'ireo olona mampiasa ny kaodinao fa ny serivisy feo ho an'ny mpampiasa dia tsy ny safidy tsara indrindra. Te-hahita plugin WordPress ho an'ny fanarahan-maso ny bug aho fa mbola tsy nahita. Nijery bugzilla avy tamin'ireo tovolahy tao mozilla aho ary tiako izany, saingy tsy afaka mametraka azy aho satria tsy manana fidirana shell ao amin'ny kaontiko fampiantranoana. Amin'izao fotoana izao dia mizaha toetra Mantis availabe ao amin'ny mantisbt.org aho, saingy tsy azoko antoka izany satria sarotra ho ahy ny mahatakatra ny kaody ary noho izany dia sarotra ny manova azy sy mampihatra lohahevitra sns. Miala tsiny amin'ny hevitra be nataoko, lahatsoratra tsara . Luis
18 Jul 2009 amin'ny 5:23 PM
Misy fametrahana ve ka hiseho ilay fizarana 'bug' eo ambanin'ny fikandrana fanehoan-kevitra? Tsy miseho amin'ny ahy io, ary tsapako fa misy zavatra tsy mazava hita ao amin'ny admin…
18 Jul 2009 amin'ny 5:30 PM
Nevermind… azoko izany. Mbola tsy azoko an-tsaina hoe ahoana - rehefa mampiditra hevitra lohahevitra vaovao aho, maninona no tsy miseho ao amin'ny efijery voalohany ireo, aorian'ny famafana ireo lohahevitra tsy misy fotony…
Sep 19, 2013 amin'ny 1: 53 AM
Tsara, misaotra nizara…!